Garmin anopa iyo Vivoactive 3, imwe inopfeka kukwikwidza neApple Watch | Ndinobva mac
Garmin anopa iyo Vivoactive 3, imwe inopfeka kukwikwidza neApple Watch
Kunyangwe hazvo chiratidzo chekutanga chemubhadharo wemagetsi nema smartphones chakange chisina kupihwa naApple, chave chirevo muchikamu ichi uye tinogona kuwedzera kuwana mumusika huwandu hukuru hwemidziyo uye mapuratifomu anotibvumidza isu kubhadhara zvakananga kubva pachiuno chedu kana kubva kune yedu smartphone.
Samsung ndeimwe yevakarwa muhondo pamwe neApple Pay mune ino chikamu, chikamu icho Fitbit ichangobva kujoina nayo yazvino smartphone inonzi Iconic uye zvakare Garmin neVivoactive 3, chishandiso chinoburitsa iyo Garmin isina kuonana yekubhadhara chikuva. Ichi chishandiso, senge yeFitbit Iconic, chakarova musika kukwikwidza zvakananga neApple Watch Series 2.
Garmin haasi mweni mune ino chikamu, nekuti yakagara iri chirevo munyika yezvemitambo chiitiko uye sezvo zvakanyatsobatanidzwa. Munyika yezvipfeko iyo kambani haina kuodza moyo chero nguva. Iyo Garmin Vivoactive 3 inoongorora zvinoitwa nemoyo wedu, pamwe neiyo oxygen level muropa (basa rinowanikwawo paFitbit Iconic asi kwete paApple Watch), inosanganisa GPS yekuziva nguva dzese nzira yatinotora kana isu enda kunorovedza muviri, haina mvura ...
Sezvatinogona kuona, Garmin akaita zvese zvaaigona, saFitbit, kuvhura ichi chizvarwa chitsva chekupfeka icho Ivo vanoenda vakananga kunokwikwidza vachipesana neApple Watch Series 2, asi sezvo isu tichiona kusanganisa mamwe mabasa. Asi semazuva ese, iyo Apple ecosystem ndiyo Apple ecosystem uye vashandisi vanoshandisa zvese Apple zvigadzirwa ini ndinokahadzika kuti havangatombofunga kufunga nezve chero eaya mamodheru chero nguva. Asi havazi vese vanoshandisa chete Apple ecosystem yezvose. Ndipo panofanirwa kuvezwa naGarmin naFitbit, kunyanya pamutengo wadzo, $ 299.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Garmin anopa iyo Vivoactive 3, imwe inopfeka kukwikwidza neApple Watch
Foxconn inotarisira kuwana purofiti yepamusoro kwazvo munhoroondo yayo mumwedzi iri kuuya
Bragi Dash inosanganisira Amazon Alexa wega mubatsiri